Ny famangiana “Ad Limina” - Fihirana Katolika Malagasy
Ny famangiana “Ad Limina”
Daty : 16/03/2014
Ny famangiana “Ad Limina” na ny marimarina kokoa “Ad Limina apostolorum” dia ny famangiana ataon’ny eveka amin’ny Papa any Vatikana. Isaky ny dimy taona, araka ny voalazan’ny Lalanan’ny Fiangonana (Droit Canon) Lah. 399, ny eveka rehetra dia asaina mamangy ny Papa mba hitondra ny tatitra sy hifampidinidinika ny momba ny diosezy iadidiany tsirairay. Mandritra izany ihany koa no andehanan’ireo eveka ireo mamangy ny fasan’i Paoly sy Piera.
Ny famangiana “ad limina” voalohany indrindra ara-tantara dia tamin’ny nandehanan’i Paoly niakatra ho any Jerosalema hitsidika an’i Piera araka ny taratasy ho an’ny Galata “Efa telo taona taty aorian'izany, vao niakatra hamangy an'i Piera tany Jerosalema aho, sy nitoetra tao aminy tapa-bolana” (Ga 1:18).
Ny nahatonga ny fiteny hoe “Ad Limina Apostolorum” kosa dia noho ireo kristianina voalohany izay nandeha namangy ny fasan’i Piera sy Paoly (nantsoina tamin’izany hoe “limina apostolorum”).
Araka ny voalazan'i Papa Benoa XVI dia tsy fombafomba fotsiny ny famangiana ataon'ireo Eveka fa tena fifampiresahana sy fifampidinihina mihitsy. Izy, hoy ihany izy, dia miresaka mivantana tsirairay amin'ireo Eveka izay tonga mandritra ny "Ad limina".
Noho ny habetsaky ny isan'ny diosezy amin'izao fotoana izao sy ny habetsaky ny isan'ny eveka ary koa ny asa maro sahanin'ny Papa dia tsy tratra intsony io 5 taona io satria tsy maintsy mihaona amin'ny eveka rehetra eran-tany izany izy. Ny Evekan'i Madagasikara ohatra dia tamin'ny 2005 no nihaona farany tamin'ny Papa tamin'ny famangiana Ad limina ary ny taona 2014 indray vao manao izany manaraka.
(sary: Olo Raiky)
AUX ÉVÊQUES DU MADAGASCAR
< FANAZAVANA NY FIZOTRAN’NY LITORJIA AMIN’NY LAMESA
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0201 s.] - Hanohana anay